जन्मदिने आमालाई यसरी धरधरी रुवाए छोराले – हेर्नुहोस् दर्दनाक भिडियो
Homeबिबिधजन्मदिने आमालाई यसरी धरधरी रुवाए छोराले – हेर्नुहोस् दर्दनाक भिडियो
July 27, 2020 kandai kanda 1 बिबिध
काठमाडौँ । पुनमाया नेपालले कहिल्यै सोचेकै थिइनन्की आँफुलाई जन्मदिने छोराले नै सारा सम्पत्ती सहित फ’रार हुन्छिन् भन्ने । पुनमायाका छोरा कृष्णले आमाको नामको जग्गा धितो राखेर पैसा बोकेर बे’पत्ता भएका छन् ।
जेठा छोरा कृष्णले आमाको नामको सबै जग्गा धितो राखेर फरार भएपछि मिडियामा आएकी पुनमाया भक्कानिएर रोएकी छिन् । कृष्णले आमाको उक्त जग्गा राखेर १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बोकेर फरार भएको उनले भक्कानिदै भनिन् ।
घरबाट निस्किँदा छोरीलाई ब्लड क्या न्सर भएको भन्दै आमाको जग्गा राखेर पैसा निकालेर फरार भएका उनले ढाँटेको रहस्य बाहिरिएको बताइएको छ ।
१७ वर्ष अघि पतिलाई गुमाएकी पुनमायासँग अहिले १९ वर्षका कान्छा छोरा छन् । उनी पनि अ’पांग छन् ।
सुन्दा सुन्दै भक्कानिएर रुन मन लाग्ने पुनमायाको द’र्दनाक कहानीले भरिएको यो भिडियो हेर्नुहोस्
जापान जाने सोचमा हुनुहुन्छ? सचेत रहनुहोस
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् साऊन १३ गते मंगलबारको राशिफल